विवाह र नेपालमा बालविवाह
प्रकाशित मिति: आश्विन ५, २०७७ / रेजिना कार्की
विवाह, सृष्टिको निरन्तरताका लागि नयाँ संस्था निर्माणको सर्वव्यापी सामाजिक प्रक्रिया हो । सामान्य भाषामा विपरीत स्त्री र पुरुषबिच पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गर्ने÷गराउने, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक कार्य विवाह हो ।
आधुनिक समाजमा विवाह गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने व्यक्तिको स्वैच्छिक र नैसर्गिक अधिकार हो । जीवन यापनका लागि आवश्यक विविध आधारबाट परिपक्व उमेर भइसकेका नारी पुरुष आपसी सहमतिमा “परिवार” गठनका लागि विवाहको निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तथापि नेपालको सन्दर्भमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको छ । विवाहका लागि २० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । सो भन्दा कम उमेरमा भए गरिएको विवाहलाई बालविवाह मानिन्छ ।
नेपालमा बालविवाहको चलन अझै रोकिन सकेको छैन । यसले खास गरी बालिकाहरूको जीवनमा नकारात्मक नतिजा ल्याउने गरेको आकलन मैले गरेकी छु । यसको अर्थ पुरुष पीडित हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन । यो कुरा तपाई हामी, हाम्रो परिवार र सिङ्गो समुदायलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
बालविवाह तपाई हाम्रै घर आँगन तथा समुदायमा भइरहेको कुरा न तपाई नकार्न सक्नुहुन्छ न त म नै ! विवाह, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनका लागि साथ दिने जीवन साथी छनोट गर्ने जीवन भरीकै एउटा अवसर हो । तर, परिपक्व नहुँदै, असल वा कमसलको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास भइन सकेको उमेरमा अभिभावकको इच्छा र आदेश अनुसार भविष्य निर्माणको कार्यलाई बन्दी बनाएर अपरिचितसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिन पर्ने कस्तो विडम्बना ! तपाई एउटा बुवा, एउटा दाजु, एउटी आमा अनि एउटी दिदीका नाताले यस्तो लाग्दैन ? कि बालविवाह जस्तो अमानवीय क्रियाकलाप गर्नु/गराउनु/सामेल हुनु भनेको बालबालिकाको जीवन बरबाद गर्नु मात्र नभई सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको जर्गेना गर्नु हो ? बालविवाहका प्रचलित कारण मेरो विचारमा, दाइजो प्रथाले अड्डा जमाएको हाम्रो समाजमा दाइजो कै कारण छोरीको सानै उमेरमा विवाह गरी दिने गरेको हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
हुन त बालविवाह पुराना संस्कृति र जातीय व्यवस्थाहरूसँग जोडिएको विषय हो । रजस्वला नहुँदै कन्यादान गरे स्वर्ग प्राप्ति हुने मान्यताले जरो गाडेको हाम्रो समाजले कस्तो स्वर्ग प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको हो, यो कुन हदसम्मको भ्रामक मान्यता हो ? सानै उमेरमा विवाह गरिदिएर आफ्ना बालबालिकाको भविष्य नै अन्धकार बनाउँदा धर्म मिल्ने जस्तो रुढीग्रस्त सामाजिक मान्यताको भ्रम हाम्रो समाजमा अद्यापी छ ।
छोरीलाई उमेरसम्म घर राख्दा पढाउन पर्ने तथा खर्च हुने भएको हुँदा एक दिन जसरी नि अर्काको घर जानै पर्ने हो धेरै खर्च किन गर्नुपर्‍यो ? बरु छोरी पढाउने खर्चले गतिलो विवाह गरिदिने तथा केटा पक्षलाई दाइजो प्रशस्त दिए खुसी हुने लगायतका गलत दृष्टिकोण तथा रुढीग्रस्त विचारहरूले गर्दा समाजमा बालविवाह दुवो मौलाए झैं मौलाई रहेको छ । केटा पक्षबाट केटीलाई उच्च शिक्षा दिने, राम्रो खान लाउन दिने छोरीसरह व्यवहार गर्ने लगायतका लोभ लालच देखाइ विवाह गर्ने/गराउने कारणले पनि बालविवाह प्रोत्साहन भइरहेको छ ।
यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा गरिबी पनि बालविवाहको प्रमुख कारण हो । बालविवाहको नतिजा सानै उमेरमा गरिने विवाहले विभिन्न समस्याको दुष्चक्रसँगै रोग, भोक, शोषण र दुर्व्यवहार बालबालिकाको नियति बनेको छ । यस कुप्रथाले बालबालिकाको भविष्यलाई भयावह स्थितिमा पु¥याएको तपाई हामीले देखे भोगेकै छौँ । छि ! कति लज्जास्पद ! बालविवाह जस्तो अमानवीय क्रियाकलापले हाम्रो घरपरिवार, समाजका धेरै जसो बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा परिवार र समाजबाट दण्डित हुन परेको छ, समाज र व्यक्तिबाट दुर्व्यवहार व्यहोर्न परेको छ, यौन शोषणमा पर्नु परेको छ । जति जे भोग्नु वा व्यहोर्नु परे पनि यस्ता आपराधिक घटनाबाट पीडित न्यायका लागि बाहिर आउन सक्तैनन् । जति आउँछन् तिनीहरूले पनि न्याय भन्दा बढी सामाजिक बेइजति पाउने गर्छन् । न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती वा शक्ति वा पहुँचका आधारमा हुने न्याय सम्पादनलाई ध्यानमा राखेर पीडित सकेसम्म अन्याय सहेर बस्छन् । कानुनी कारवाहीको दायरामा त झुक्किएर १/२ वटा भन्दा बढी आउँदै आउँदैनन् ।
बालविवाह विरुद्ध हाम्रो प्रयास के तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन ? जस्तो कि बालविवाह बाल अधिकार, महिला अधिकार तथा अन्य अधिकारको हनन मात्र नभई समग्र देश विकास र समृद्धिको बाधक हो भनेर ? यो सब गर्नु/गराउनु मुलुकी ऐन विरुद्धको अपराध हो भन्ने कुरा निःसन्देह भन्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्र निकाय तथा दृष्टिकोणबाट बालबालिकाको विषयलाई किन सहायक विषय बनाएर हेरिरहेको छ ? के बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध न्यूनीकरण गरी छुट्टै विषयको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छैन र ? हाम्रो शिक्षित दिमागको चेतना स्तर कुन हदसम्मको छ भन्ने कुरा हाम्रो सिकाइको हैन व्यवहारले झल्काउँछ । नीच सोच अनि तल्लो स्तरको चेतनाको स्तरले गर्दा धेरै बालबालिकाको जिन्दगी अन्धकार भएको छ । के हामी हाम्रो न्युनस्तरीय चेतनालाई थोरै मात्र भए पनि फराकिलो बनाएर बालविवाह जस्तो कु–प्रथालाई तपाई हाम्रो घरघरबाट सदाका लागि उन्मुलन गरेर एउटा सुन्दर र परिपक्व समाज निर्माण गर्न सक्दैनौ र ? यस विषयमा विनासंकोच भन्न सकिन्छ, हाम्रो चेतना स्तर सामाजिक प्रचलन विरुद्ध उभिन अझै सशक्त भइसकेको छैन कमजोर नै छ ।
हामीमा शिक्षा वा ज्ञानको अभावले यसो भएको हो त ? अहँ ! पटक्कै हैन ! हामीमा बालविवाहका जोखिम बारे पर्याप्त ज्ञान तथा शिक्षा छ । तर हामी यस सामाजिक विकृति नियन्त्रण गर्न किन सकिरहेका छैनौँ ? एकातिर बालविवाह गलत हो, हुनुहुँदैन भन्ने अर्कोतिर आफ्नो, वा आफन्तकोमा पर्दा पछि नहट्ने ! हाम्रो यही द्वैध चरित्रले ग्रसित भएकाले कानुनी बन्देज हुँदाहुँदै पनि यो कुसंस्कार हट्न सकेको छैन । यसका लागि, बालविवाह जस्तो गैर कानुनी र गैर मानवीय क्रियाकलापको जोखिममा रहेको व्यक्ति, समुदायमा बालविवाहको जोखिम सम्बन्धी जानकारी तथा विभिन्न चेतनामूलक सन्देशहरू पु¥याउन आवश्यक छ । जो, जहाँ, जुन अवस्थामा छौँ, त्यहीबाट आजैदेखि बालविवाह विरुद्ध जुटौँ । बालविवाहलाई जसरी हुन्छ निरुत्साहित गरौँ । बालविवाह गर्ने/गराउने र बालविवाह सामेल हुनेलाई कानुनी दायरामा ल्याऔँ, सामाजिक बहिष्कार गर्ने नियम ल्याऔँ र कार्यान्वयन पनि गरौँ । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार तथा वर्तमानका साझेदार हुन भन्ने कुरा नभुलौँ ।